कसरी मापन गर्ने, बेवास्ता गर्ने र उच्च शपिंग कार्ट त्याग दरहरू कम गर्ने Martech Zone
कसरी मापन गर्ने, बेवास्ता गर्ने र उच्च शपिंग कार्ट त्याग दरहरू कम गर्ने
बिहीबार, अक्टुबर 22, 2020 बिहीबार, अक्टुबर 22, 2020 Douglas Karr
मँ जब सँधै एक अनलाइन चेकआउट प्रक्रियाको साथ ग्राहकलाई भेट्छु र म उनीहरूको थोरै व्यक्तिले आफ्नै साइटबाट खरीद गर्न खोजेको हुँ भने म सँधै छक्क पर्छु! हाम्रो नयाँ ग्राहकहरु मध्ये एकको साइटमा उनीहरूले एक टन पैसा लगानी गरे र यो होम पेजबाट शपिंग कार्टमा जान steps चरणहरू छन्। यो आश्चर्यकर्म हो कि कसैले यसलाई यति टाढा बनाउँदैछ!
शपिंग कार्ट त्याग्नु भनेको के हो?
यो एक प्राथमिक प्रश्न जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईले यो बुझ्नु पर्छ कि शपिंग कार्ट त्याग तपाईको इकमर्स साइटमा हरेक आगन्तुक होईन। शपिंग कार्ट परित्याग केवल ती आगन्तुकहरू हुन् जसले शपिंग कार्टमा एक उत्पादन जोडे र त्यस सत्रमा खरीद पूरा गरेन।
शपिंग कार्ट त्याग तब हुन्छ जब सम्भावित ग्राहकले अनलाइन अर्डरको लागि चेक आउट प्रक्रिया सुरू गर्दछ तर खरीद पूरा गर्नु अघि प्रक्रियाबाट बाहिर जान्छ।
धेरै खरीददारहरूले ब्राउज गरी खरीद गर्न को लागी कुनै मनसाय बिना शपिंग कार्टमा उत्पादनहरू थप गर्दछ। तिनीहरू केवल उत्पादनहरूको लागि उप-कटाल, वा अनुमानित शिपिंग लागत, वा डेलिभरी मिति हेर्न चाहन्छन् ... त्यहाँ धेरै संख्याका वैध कारणहरू छन् किन मानिसहरूले शपिंग कार्ट त्याग्छन्।
तपाईंको शपिंग कार्ट त्याग दर कसरी गणना गर्ने
शपिंग कार्ट त्याग दर को लागी सूत्र:
एनालिटिक्समा किनमेल कार्ट त्याग मापन गर्ने
यदि तपाईं आफ्नो ईकॉमर्स साइटमा गुगल एनालाइटिक्स प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं हुनु पर्छ ecommerce ट्र्याकिंग सेटअप गर्नुहोस् तपाइँको साइट मा। तपाईं आफ्नो शपिंग कार्ट त्याग दर र रूपान्तरणहरू> ईकामर्स> शपिंग ब्यवहारमा विवरणहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ:
नोट गर्नुहोस् कि त्यहाँ दुई फरक मेट्रिक्स छन्:
कार्ट त्याग - यो एक शपर हो जसले कार्टमा उत्पादन थपेको छ तर खरीद पूरा गरेको छैन।
चेक आउट त्याग - यो एक शपर हो जसले चेक आउट प्रक्रिया शुरू गर्यो तर खरीद पूरा गरेन।
उद्योगमा अर्को शब्द पनि छ:
परित्याग ब्राउज गर्नुहोस् - यो एक शपर हो - सामान्यतया दर्ता गरिएको - जसले तपाइँको साइटलाई ब्राउज गर्‍यो तर कार्टमा कुनै उत्पादनहरू थप गर्नुभएन र केवल साइट छोड्नुभयो।
औसत शपिंग कार्ट त्याग दर के हो?
संग सावधान रहनुहोस् औसत कुनै पनि प्रकारको तथ्या .्कमा दरहरू। तपाइँका उपभोक्ताहरू उनीहरूको टेक्निकल क्षमता, वा तिनीहरूको जडान, वा तपाइँको प्रतिस्पर्धामा फरक हुन सक्छ। जबकि यो एक उत्तम आधारभूत हो, म तपाईंको शपिंग कार्ट त्याग दरको प्रवृत्तिमा बढी ध्यान दिन्छु।
ग्लोबल औसत - कार्ट त्यागको वैश्विक औसत दर .75.6 XNUMX..XNUMX% छ।
मोबाइल औसत - .85.65 XNUMX..XNUMX% मोबाइल फोनमा औसत त्याग दर हो।
बिक्री को घाटा - ब्रान्डहरूले त्यागिएका शपिंग कार्टबाट १ revenue अर्ब डलरसम्म राजस्व गुमाउँछन्।
उद्योग द्वारा औसत शपिंग कार्ट त्याग दरहरू के हुन्?
यो डाटा 500०० भन्दा बढी ईकॉमर्स साइटहरुबाट लिइएको छ र छ वटा प्रमुख क्षेत्रहरु बाट परित्याग दर ट्र्याक गर्छ बिक्रीcle.
वित्त - एक .83.6 XNUMX.%% शपिंग कार्ट त्याग दर छ।
गैर लाभ - एक .83.1 XNUMX.%% शपिंग कार्ट त्याग दर छ।
यात्रा - एक .81.7 XNUMX.%% शपिंग कार्ट त्याग दर छ।
फुटकर - एक .72.8२..XNUMX% शपिंग कार्ट त्याग दर छ।
फेशन - एक .68.3२..XNUMX% शपिंग कार्ट त्याग दर छ।
गेमिङ - एक .64.2२..XNUMX% शपिंग कार्ट त्याग दर छ।
किन मानिसहरू शपिंग कार्ट त्याग्छन्?
वैध कारणहरू बाहेक, त्यहाँ चीजहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो शपिंग कार्ट अनुभवमा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ परित्याग दर कम गर्न:
तपाईंको पृष्ठ गति सुधार गर्नुहोस् -% 47% खरिदकर्ताहरूले वेब पृष्ठ दुई सेकेन्ड वा कममा लोड हुने आशा गर्छन्।
उच्च शिपिंग लागत - shipping 44% किनमेल गर्नेहरूले उच्च शिपिंग लागतका कारण कार्ट छोड्छन्।
समय प्रतिबन्धहरू - २pers% खरीददारहरूले समयको अवरोधका कारण कार्ट छोडे।
कुनै शिपिंग जानकारी छैन - २२% खरीददारहरूले कुनै शिपिंग जानकारीको कारण कार्ट छोडे।
स्टक बाहिर - १pers% दुकानदारहरूले खरीद पूरा गर्दैनन् किनकि एउटा वस्तु स्टक बाहिर छ।
खराब उत्पाद प्रस्तुति -%% खरिदकर्ताहरूले खरीद जानकारी पूरा गर्दैनन् किनभने कन्फ्युज उत्पाद जानकारीको कारण।
भुक्तानी प्रशोधन मुद्दाहरू - २% खरिददारहरूले भुक्तानी प्रशोधन मुद्दाहरूको कारण खरीद पूरा गर्दैनन्।
म मेरो आफ्नै रणनीति सिफारिस गर्दछु, भनिन्छ १ and र test० परीक्षण… प्राप्त एक 15 वर्षीया केटी र एक -० वर्ष पुरानो एक तपाइँको साइटबाट केहि खरीद गर्न। उनीहरूले कसरी गरे त्यसमा ध्यान दिनुहोस् र यो कसरी निराश थियो। तपाईं तिनीहरूलाई देखेर मात्र एक टोन पत्ता लगाउनु हुनेछ! तपाईं पूर्ण रूपमा परित्यागलाई रोक्न सक्नुहुन्न, तर तपाईं यसलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ।
शपिंग कार्ट त्याग कसरी कम गर्ने
शपिंग कार्ट कम गर्न को लागी आलोचनात्मक प्रदर्शन, जानकारी, र माथिको ट्रस्ट मुद्दाहरूलाई पार गर्दै छ। तपाईको चेकआउट पृष्ठमा सुधार गरी यो धेरै जसो सुधार गर्न सकिन्छ।
प्रदर्शन - डेस्कटप र मोबाइल दुबैमा तपाईंको पृष्ठ प्रदर्शन परीक्षण र सुधार गर्नुहोस्। तपाईको साइटलाई परिक्षण पनि लोड गर्न नबिर्सनुहोस् - धेरै व्यक्तिले एउटा साइट परीक्षण गर्छन् जससँग धेरै आगन्तुकहरू छैनन् ... र जब ती सबै आउँछन्, साइट बिग्रन्छ।
मोबाइल - निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको मोबाइल अनुभव उत्कृष्ट र एकदम सरल छ। स्पष्ट, ठूलो, सरल पृष्ठहरू र प्रक्रियाहरूका साथ विरोधाभासित बटनहरू मोबाइल रूपान्तरण दरहरूको लागि महत्वपूर्ण छन्।
प्रगति सूचक - तपाईंको शपरलाई देखाउनुहोस् कि कति चरणहरू खरीदहरू पूरा गर्नुहोस् ताकि तिनीहरू निराश नहोस्।
कार्य गर्न कल - स्पष्ट, कन्टेस्ट्रेटेड कल-टु-एक्शन जसले खरीद प्रक्रिया मार्फत शपरलाई ड्राइभ गर्न महत्वपूर्ण छ।
नेविगेशन - स्पष्ट नेभिगेसन जसले एक व्यक्तिलाई अघिल्लो पृष्ठमा फर्कन वा प्रगति नगुमाई शपिंगमा फर्कन सक्षम गर्दछ।
उत्पादन जानकारी - बहु दृश्यहरू, जुम, उपयोग, र प्रयोगकर्ताले सबमिट गरेको उत्पाद विवरण र छविहरू प्रदान गर्नुहोस् ताकि शपरहरू विश्वस्त छन् कि उनीहरूले आफूले चाहेको कुरा पाइरहेका छन्।
मदत - फोन नम्बरहरू प्रदान गर्नुहोस्, च्याट गर्नुहोस्, र दुकानदारहरूलाई सहयोगी किनमेल पनि गर्नुहोस्।
सामाजिक प्रमाण - सम्मिलित गर्नुहोस् सामाजिक प्रमाण पपअपहरू र ग्राहक समीक्षा र प्रशंसापत्रहरू जस्तै अन्य पसलहरूले तपाईंलाई विश्वास गर्दछ।
भुक्तानी विकल्पहरू - भुक्तानी प्रक्रिया को समस्याहरु लाई कम गर्न भुक्तान वा वित्तिय सबै तरिकाहरू थप्नुहोस्।
सुरक्षा ब्याजहरू - तेस्रो-पक्ष अडिटबाट ब्याज प्रदान गर्नुहोस् जसले तपाईंको खरीददारहरूलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईंको साइट सुरक्षाको लागि बाह्य रूपमा मान्य गरिएको छ।
शिपिंग - एक zip कोड प्रविष्ट गर्न एक साधन प्रस्ताव गर्नुहोस् र अनुमानित शिपिंग समयरेखा र लागतहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
पछि बचत गर्नुहोस् - आगन्तुकहरु को लागी उनीहरुको कार्ट पछि को लागी बचत गर्न को लागी एक साधन प्रदान गर्नुहोस्, एक इच्छा सूचीमा जोड्नुहोस्, वा शेयर उत्पादनहरु को लागी ईमेल अनुस्मारक प्राप्त गर्नुहोस्।
उदारता - रूपान्तरण दर वृद्धि गर्न समय-सम्बन्धित छुट वा बाहिर निस्के आशय प्रस्ताव।
दर्ता - चेकआउट गर्न आवश्यक भन्दा बढि अरू कुनै जानकारीको आवश्यक पर्दैन। दर्ता प्रस्ताव एक पटक शप्टर चेक आउट भएपछि, तर तिनीहरूलाई प्रक्रियामा जबरजस्ती नगर्नुहोस्।
परित्याग किनमेल कार्टहरू कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने
त्यहाँ केही अविश्वसनीय ऑटोमेशन प्लेटफर्महरू छन् जुन तपाईंको साइटमा दर्ता शपर्सलाई क्याप्चर र ईमेल गर्दछ। तपाईंको पसललाई उनीहरूको कार्टमा के छ भनेर विवरणहरूको साथ दैनिक रिमाइन्डर पठाउनु तिनीहरूलाई फर्काउनको लागि उत्तम तरिका हो।
कहिलेकाँही, एक शपरले केवल भुक्तानीको लागि पर्खिरहेका हुन्छन् ताकि तिनीहरूले खरीद पूरा गर्न सकून्। त्यागिएको शपिंग कार्ट ईमेलहरू स्प्याम होइनन्, तिनीहरू प्राय: सहयोगी हुन्छन्। र तपाईको इ-मेलमा तपाईको शपरलाई कार्टको लागि सम्झाउने रोक्नको लागि कार्य गर्न कडा कल गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सुझाव दिन्छौं Klaviyo or कार्ट गुरु यस प्रकारको स्वचालनका लागि। तिनीहरूसँग पनि छ त्याग ब्राउज गर्नुहोस् र आउट-अफ-स्टॉक अनुस्मारकहरू तिनीहरूको स्वचालन प्रक्रियामा!
बाट यो इन्फोग्राफिक मोनेट तपाईंको चेकआउट प्रक्रिया सुधार गर्ने र किनमेल कार्ट परित्याग घटाउने बारे केही राम्रो सल्लाहहरू छन्। यिनीहरूले "टाढा" भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन् जुन म विश्वास गर्दैनु सहि छ, यद्यपि। कसैले पनि गर्न सक्दैन जोगिन शपिंग कार्ट त्याग तिनीहरूको ईकमर्स वेबसाइटमा।
टैग: त्यागत्याग गर्नबाट बच्नुहोस्त्याग ब्राउज गर्नुहोस्कार्ट त्यागचेक आउट त्यागचेकआउट पृष्ठचेकआउट पृष्ठ डिजाइनचेकआउट पृष्ठ प्रक्रियाई-वाणिज्यइकमर्सशपिंग कार्ट त्याग पुनर्प्राप्तिशपिंग कार्ट त्याग कम गर्नुहोस्किनमेल कार्टकिनमेल कार्ट त्यागशपिंग कार्ट त्याग तथ्या .्क
१० कारणहरू तपाईंको साइटले जैविक श्रेणीकरण गुमाइरहेको छ ... र के गर्ने
Khoros विपणन: सामाजिक मीडिया मार्केटिंग र उद्यम को लागी प्रबंधन
बफर प्लगइनलाई माया गर्दै।
म सहमत छु, यो अचम्मको कुरा हो कि मानिसहरूले "आफ्नो खाना पकाउने प्रयास" गर्दैनन् वा अरूले किन्न खोजेको हेरिदैनन्।
घर हिट गर्ने अर्को बिन्दु पदोन्नति कोड बाकस लुकाउँदै थियो। म सामान्यतया जमानत दिन्छु र कोड खोज्न वा कम लागतको साथ अर्को साइट फेला पार्न प्रयास गर्दछु।
१ 15 र test० लाई प्रेम गर्नुहोस्!
Ve, त्यहाँ 15 वर्षको र 50 वर्षको उमेरको भन्दा बढि राय छैन 🙂